Ujeedada Shabaab hujuumka ugu hayaan Galmudug iyo halka ay hiigsanayaan | Dhacdo
Home Wararka Maanta Ujeedada Shabaab hujuumka ugu hayaan Galmudug iyo halka ay hiigsanayaan
Ujeedada Shabaab hujuumka ugu hayaan Galmudug iyo halka ay hiigsanayaan
Maleeshiyada Ururka Al Shabaab ayaa in muddo ahba culeys xoogan ku hayay Maamulka Gobolada Dhexe ka dhisan ee Galmudug, inkastoo bishii hore laga saaray deegaano dhaca Koonfurta Gobolka Mudug, qaarkoodna ay dib u qabsadeen maalmihii la soo dhaafay.
Cabdisalaan Yuusuf Guuleed, Taliye Kuxigeenkii hore ee Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka (NISA) ayaa sheegay in ujeedka Shabaabku uu dhaafsiisan yahay Galmudug, iyagoona ku sii jeeda sida uu sheegay deegaanada Puntland.
Cabdisalaan Yuusuf Guuleed oo la hadlay BBC Somalitv, waxna laga weydiiyay waxa keenay in xilligan ay Shabaabku culeys weyn soo saaraan Galmudug ayaa sheegay inay ugu wacan tahay Maamulkii Ahlu Sunna oo ka hortaagnaa inay isu ballaariyaan deegaanada Galmudug oo meesha ka baxay.
“Shabaab way jooggeen qaybo badan oo ka mid ah Mudug iyo Galgaduud, hadda waxaad u maleysaa billihii ugu dambeeyay inay dhul badan qabsanayeen, taa waxay la socotaa Shabaabka oo dareemaya in Ahlu Sunna Waljameeca oo dagaal muddo toban sano ah kula jirtay, dhulkaana ka xoreysay inay meesha ka baxday, oo maamulka cusub ee Galmudug uu meesha ka saaray. Guul weyn ayay u tahay Shabaabka inay qabsadaan dhulkii Ahlu Sunna tobanka sano ka hortaagneyd.” Ayuu yiri Cabdisalaan Yuusuf Guuleed.
Waxa kaloo uu yiri “Maanta waxay dareemayaan Al Shabaab in wadanka doorasho ka jirto, in siyaasaddii uu qalqal weyn iyo isku mashquulid ka jiro, aysan-na jiri doonin awood weyn oo looga horyimaado.”
Cabdisalaan Yuusuf ayaa tilmaamay in Shabaabku ay hiigsanayaan, sidii ay ku gaari lahaayeen Gobolada Bariga Somaliya.
“Qorshe muddo dheer ay qorsheynayeen ayay meesha ku yimaadeen, waxayna u socdaan Gobolada Bari.” Ayuu yiri Cabdisalaan Yuusuf.
Dhanka kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee PST-ta Puntland isu diyaarinayaan ka qayb qaadashada hawlgalka Gobolka Mudug, ee Shabaabka looga xoreynayo deegaanada Galmudug.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Galmudug ay weydiisatay Puntland inay ka gacan-siiso gulufka ka dhanka ah maleeshiyada Al Shabaab, waana xilli labada maamul ay muddooyinkii ugu dambeysay iska kaashanayeen amniga Magaalada Gaalkacyo.
Wasiirka Amniga Galmudug, Axmed Macalin Fiqi ayaa Talaadadii ku hanjabay in Ciidamada Huwanta sii wadi doonaan hawlgalka argagixiso la dirirka.
Previous articleSafaaradda Somaliya ee Pakistan oo war ka soo saartay cabasho laga keenay
Next articleGalmudug oo gaadiid dagaal kula wareegtay Magaalada Gaalkacyo (SAWIRRO)